समाज का बैमानिहरुले पाएको इमान
तिम्रो ठाडो प्रतिकार
लेखक ज्यु !
तिम्रो प्रतिकारमा मेरो स्बिकार ।
जे जस्तो देख्यौ
त्यस्तै नै लेख्यौ
हाम्रो समाज असक्त्त छ
तिम्रो कथा शसक्त छ
यहाँ रबिमान हरु
सम्मान पाउन रुपैयाँ खनाइरह्न्छन
शंकर प्रध्यापक हरु
हजारौ हजा र लाई जिन्दगी दिन्छन
तर आफ्नो जिन्दगी
धोबिले झै धुन्छन
इमान्दारी हरुको दु:ख को जिन्दगी --
बैमानी हरुको सयल को जिन्दगी --
बुझ्ने ले भन्छ
क्या जमाना आयो ! ----
यस्तो जमाना त आएको छ
तर यो जमाना लाई
लाज मर्दो बनाउन
यहाँ शेखर हरुको कलम ले
यसरी नै पर्दा उघार्नु पर्छ
रातको अन्तिम प्रहरमा
बिहानिले पर्दा उघार्छे ---------
शेखर जि ! तपाईंको कथाले हाम्रो समाज को तितो यथार्त लाई देखएको छ ।
तपाईंको लेख - कथा निरन्तर पढ्न पढ्न पाइयोस ।